Abona basebenzisi babalaseleyo bemilambo, khuphela ngokukhawuleza kwaye ungcono kunye nabo | Iindaba zeGajethi
Itekhnoloji ye-P2P, exhomekeke kuyo kakhulu xelisa njengoko iBittorrent iguqukile ukubonelela ngesixhobo esikhulu. I-Bittorrent yinkqubo yokwabelana ngefayile, kodwa ngokungafaniyo ne-emule, ikhompyuter nganye iba ngumthombo wazo zonke iindawo zefayile ezikhutshiweyo ukuza kuthi ga ngoku, ngale ndlela, Ukukhuphela iifayile ngokukhawuleza okukhulu.
Kodwa, ngokungafaniyo ne-emule, Itekhnoloji yeBittorrent ifuna aba trackers, ukuze umxhasi weT Torrent azi apho aya khona ukuze akhuphele umxholo, xa kufuneka ngokupheleleyo ukuqala ukhuphelo lwalo naluphi na uhlobo lomxholo. Ukuba awuyazi ukuba yeyiphi iklayenti oyikhethayo, siya kukubonisa ukuba yintoni oyena mthengi ungcono kwezo zifumaneka ngoku kwintengiso.
1.1 Iimpawu zokuhambisa
8 Umxhasi wesifudula se-Android
9 Umxhasi we-Torrent ye-iPhone
Ngokwenyani oko kwafika kwimarike kwiminyaka eli-13 eyadlulayo, ukuGqithisela kuye kwaba esona sixhobo silungileyo kwintengiso xa kuziwa ekukhupheleni iifayile kwiBitorrent. Ukuhanjiswa sisicelo esisimahla kunye nesivulekileyo. Ngethuba leminyaka yayo yokuqala, yayifumaneka kuphela kwi-Apple desktop ecosystem, kodwa namhlanje isinika ingxelo yenkqubo ye-Windows kunye ne-Linux.
Kwakhona isinika inguqulelo ye-NAS eyahlukeneyo Ukusuka kubavelisi abaphambili, njenge-Synology, Western Digital, D-Link ... esivumela ukuba siqwalasele isixhobo ukuze sinakekele ukukhuphela umxholo ngaphandle kokusebenzisa ikhompyuter yethu. I-Tranmission isinika ithuba lokufumana ngokuzenzekelayo ukhuphelo lweefayile ze-.torrent kwikhompyuter yethu, ukuze kuthi njengoko ikhutshelwa, isicelo siyazibona kwaye siqale ukukhuphela, sisuse i-torrent ehambelanayo.
Kunye nembali yayo Ufumene ukuhlaselwa okwahlukileyo kwiiseva zayo, Ukunyanzela inkampani ukuba ibambe iinguqulelo ezikhoyo kwindawo yokugcina izinto zeGitHub. Ukuba ujonga umxhasi weTorrent engasindi kwaye yasimahla, iTranmission lolona khetho lufanelekileyo esinokulufumana ngoku kwintengiso.
Ukukhetha nokukhetha kuqala iifayile ngokweemfuno zethu.
Imephu ezenzekelayo yezibuko
Ukuvalwa ngokuzenzekelayo kwabaxhasi abafaka idatha engeyonyani.
Inkxaso yothumelo oluntsonkothileyo
Inkxaso yee trackers ezininzi
Ibar yesixhobo eyenziwe ngokwezifiso.
Iyahambelana neMagnet link.
Yintoni iTorrent kunye nendlela yokuyisebenzisa
Ukusuka kwigqala elinje ngeTransmission, siqala ukuba yinto entsha, kodwa yiyo loo nto singakwazi ukuyilawula ngaphandle kwebat. IWebTorrent isimahla, imithombo evulekileyo kwaye ayisiniki naluphi na uhlobo lwentengiso, Into yokubulela kwaye kunzima ukuyiphumeza kolu hlobo lomthengi.
Esinye sezibonelelo eziphambili esisibonelela ngokubhekisele kwabanye abathengi beTorrent, siyifumana kuloo nto Iyakwazi ukusasaza iividiyo nge-AirPlay, iChromecast kunye ne-DLNA, inqaku elinikezelwa ngabathengi abambalwa kakhulu. Iyahambelana neMagnet kunye ne-.torrent link kunye nokusebenza kwayo kulula njengokutsala iifayile ze-.torrent kwisicelo ukuqala ukhuphelo.
Njengoko igama layo libonisa, iWebhu yeTorrent ikwasivumela lawula ukhuphelo ngokusebenzisa isikhangeli sewebhu, inketho engazange icetyiswe okokoko ukuba siyasivala isikhangeli, ukhuphelo luyayeka, kodwa kunokuba kufanelekile kubasebenzisi abachitha usuku kunye nesikhangeli esivulekile.
IWebTorrent iyafumaneka kwiWindows, Mac, kunye neLinux. Khuphela iWebhu yeTorrent
Ukuba ufuna ukuba ngasese xa ukhuphela ezi ntlobo zeefayile kwi-Intanethi kwaye unomdlali odibeneyo, oyena mthengi ungcono sinokumfumana nguTribler, umthengi isebenzisa eyayo inethiwekhi isebenzisa iiseva ezintathu zommeleli phakathi komthumeli kunye nomamkeli weefayile. Kodwa ukuba ukhetho lwangasese olunokusinika alwanele, phakathi kokukhetha kwalo kunokufumana ukhetho olunokubanomdla wokuzimela ngasese.
I-Tribler, njengoThumelo kunye IWebTorrent isimahla, ngumthombo ovulekileyo kwaye ubandakanya i-injini yokukhangela ehamba nathi esibonisa iifayile ezikhutshelweyo ngokusetyenziswa komsebenzisi. Iitriblers ziyafumaneka kwiWindows, Mac kunye neLinux. Khuphela iTribler.
I-Vuze yafika kwimarike ngo-2003, kwaye kule minyaka idlulileyo, ayiphuculanga ujongano lomsebenzisi kuphela, kodwa kunye nenani lemisebenzi kunye nezinto ezinokusinika zona. IVuze idibanisa Injini yokukhangela, Njengabanyanisekileyo kuzo zonke iifayile ekwabelwana ngazo kwi-app yakho.
IVuze ayenzelwanga kuphela ukukhuphela iifayile ezinamalungelo obunini, kodwa nayo ivumela ukuba sabelane ngeefayile zomthetho nabanye abantu ngencoko ukuba isicelo sikwasinika, indlela efanelekileyo yokwabelana ngeefayile ezinkulu ngaphandle kokuya kwiiwebhusayithi ezisivumela ukuba sithumele iifayile ezinkulu.
IVuze ifumaneka kwiinguqulelo ezimbini, enye eneentengiso ezingasivumeli ukuba sidlale umxholo ngelixa ukhutshelwa okanye usinike ukhuselo kwi-antivirus kwaye enye eneentengiso, enexabiso le- $ 9,99, elisinika ezi ndlela zimbini ukongeza ekusivumeleni ukurekhoda iifayile esizikhuphele kwiDVD.
IVuze iyafumaneka kwiWindows, Linux, kunye neMac. Khuphela iVuze.
Omnye wabathengi abaziwayo kwihlabathi leBitorrent ngu uTorrent, omnye wabathengi osinika ezona zibonelelo zibalaseleyo malunga nokusetyenziswa kwezixhobo. Isicelo sithatha kuphela i-2 MB, ke sinako ukufumana umbono wezinto ezimbalwa ezinokuzifumana kwinkqubo yethu, ukuze isebenze ngasemva ngaphandle kokuqaphela nangaliphi na ixesha.
Kodwa gcina ukukhanya oko akuthethi ukuba ayiboneleli ngokhetho lokwenza ngokwezifisoKuba iTorrent isivumela ukuba silawule ukhuphelo ngokukodwa okanye ngokudibeneyo kunye nokusivumela ukuba sizilawule ngokude nge-smartphone yethu.
Ukuba sifuna ukufumana okuninzi kwi-Torrent, njengokudlala iividiyo ezikhutshelweyo okanye ukudlala umxholo ngelixa zikhutshelwa, zikhuselwe nge-antivirus, ukuhambisa iifayile ezikhutshelweyo kwizixhobo ekujoliswe kuzo okanye ukungabinaso isidingo sokukhuphela iikhowudi, Sinokukhetha ukuthenga uhlobo lwe-ProIxabiso lentengo ngama-euro angama-22.
I-Torrent iyafumaneka kwiWindows, Linux, Mac, kunye ne-Android. Khuphela iTorrent.
Kodwa ukuba yintoni ngokwenene sithanda ukhetho loqwalaselo ukuze ukwazi ukulawula ngalo lonke ixesha indlela ezikhutshelwa ngayo iifayile, umda webhendi osetyenziswa sisicelo, apho kugcinwa iifayile zethutyana kunye neefayile ezikhutshelweyo, isixa semithombo yenkqubo eyabelwe isicelo ... I-Bittorrent ngumxhasi owufunayo.
I-Bitorrent yenye yezona zinto zigqibeleleyo ukuthengisa abathengi kwintengiso, kwaye iyafumaneka kwiinguqulelo ezintathu, enye isimahla kwaye isebenza kodwa ineentengiso, enye ngaphandle kweentengiso ze- $ 4.95 ngonyaka kunye nepro Pro. Isicelo sisinika isidlali sevidiyo esakhelwe-ngaphakathi, ukhuseleko lwe-antivirus, inkonzo yabathengi, kunye nokusivumela ukuba siguqule ukhuphelo ukuze lukwazi ukudlala nakwesiphi na isixhobo.
I-Bitorrent iyafumaneka kwiWindows, Mac, kunye ne-Android. Khuphela iBitorrent
Uninzi lwabaxhasi bemilambo ivumela ukuba siqwalasele iindlela ezifanayo, ubuncinci esisiseko. Ngaphandle kokuba sifuna ukwenza usetyenziso oluthile lomthengi, eyona nto sinokuyenza kukusebenzisa isimahla kwaye sisebenzise isidlali seVLC, esifana nabaxhamli beenqanawa abasinika umdlali odibeneyo.
Ngokumalunga nokukhuselwa kwintsholongwane, ukuba uhlala usebenzisa iwebhusayithi enye ukukhuphela umsinga, kwaye khange ube nazingxaki ukuza kuthi ga ngoku malunga nosulelo, ngokunyanisekileyo awuyidingi inkqubo yolu hlobo. Ukongeza, uluntu sele luphethe uxanduva lokususa okanye lokunika ingxelo ngeefayile ezihambisa iintsholongwane okanye ezingabonisi igama ngokwenyani.
Umxhasi wesifudula se-Android
Nangona kuyinyani ukuba ayizomboniso bhanyabhanya kuphela, umculo kunye nokusetyenziswa okwabelwana ngako kwinethiwekhi yeBittorrent, nangona zimele iipesenti ezingama-99 zokusetyenziswa kwazo, iBittorrent inokusetyenziselwa yabelana ngeefayile ezincinci esingenako ukwabelana nge-imeyile. Ukulungiselela ezi njongo, ukusetyenziswa kwezikhukula kwenza ingqiqo.
Okwangoku kwintengiso, sinokufumana kuphela usetyenziso ezimbini Android esivumela ukuba sikhuphele iifayili zemisinga kwifowuni yethu elawulwa yi-Android. Sithetha ngeTorrent kunye neBittorrent, ezimbini zezona zinto zithandwa kakhulu kubathengi bekhompyuter kwihlabathi kwaye zisetyenziswa kakhulu ukukhuphela iifayile zomfula. Zombini ziyafumaneka ukhuphelo simahla ngokupheleleyo ngale linki ilandelayo.
µTorrent® -isikhupheli somlambo
Umthuthukisi: I-BitTorrent, Inc.
Umxhasi we-Torrent ye-iPhone
Umxhasi weBittorrent kwisixhobo esiphathwayo unengqondo kuphela ukuba siyisebenzisa ekwabelaneni ngeefayile ezingenandawo kwinkonzo yethu yesiqhelo yeposi, Iinkonzo ngokubanzi ezingasivumeli ukuba sidlule kuma-25 MB kweziqhotyoshelweyo. I-Apple inesisombululo esifanelekileyo kolu hlobo lwesisombululo, kuba inoxanduva lokulayisha iifayile kwi-iCloud kwaye kamva zithumele umyalezo kumamkeli onekhonkco lokuzikhuphela.
Kodwa ukuba sifuna ukusebenzisa umthengi wenethiwekhi yeBittorrent, kwiVenkile ye App asinakufumana nayiphi na usetyenziso olusemthethweni esivumela ukuba sizilawule, kuba zaphula izikhokelo zeVenkile ye App ngokukuvumela ukhuphele umxholo okhuselwe ngumalungelo obunini. Kodwa ukuba isixhobo sethu saphukile, singasebenzisa i-iTransmission application, isicelo esifumaneka kwivenkile yesicelo seCydia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Owona mthengi ulungileyo